China otomatiki Ferrite Magnetic Hydraulic Press Kugadzira uye Fekitori | Zhengxi
Zvinoumba zvemuchina: wokudhinda (kusanganisira magnetized waya pasuru), hydraulic pombi chiteshi, yemagetsi kudzora kabhodhi, jekiseni uye kusanganisa system, yekutsiva tangi; chakuvhuvhu puranga, otomatiki blank kubvisa muchina.
Zvinoumba zvemuchina: wokudhinda (kusanganisira magnetized waya pasuru), hydraulic pombi chiteshi, yemagetsi kudzora kabhodhi, jekiseni uye kusanganisa system, yekutsiva tank chakuvhuvhu puranga, otomatiki blank kubvisa muchina.
Yekutanga technical Ruzivo
1) Iyo giya pombi servo hydraulic system inoshandiswa kutonhodza iyo yekumanikidza mafuta kuverengera kumanikidza, kugadzikana uye kuvimbika kana muchina uchishandiswa uchienderera kwenguva refu;
2) Simba shoma rekushandisa uye simba rekuchengetedza. Iko kushandiswa kwesimba kwemuchina wese kwakafanana neiyo yemakumi mashanu ematani-tani yekudhinda, uye kubuda kweshifti i53% kupfuura iyo yeiyo 150-ton turu;
3) Iyo yakajairwa muforoma base yakagadzika pane inomiririra, uye iyo yakaumbwa zvikamu zvakagadziriswa zvinogona kukurumidza kukatanurwa uye kutsiviwa kana chakuvhe chatsiviwa, uye chakuvhuvhu base uye furuji yakazvimirira;
4) Muviri mukuru isimbi yakanyatsokandwa (kana yakakandwa simbi) muviri, uye ekumusoro uye ezasi mashandiro, mafuru ekuumbisa, magineti waya akaputirwa macores esimbi, nezvimwe zvese zvikamu zvesimbi. Yakakwira michini simba, compact chimiro, diki yekumisikidza nzvimbo, inokodzera manyore kana otomatiki isina chinhu kutora;
5) Iyo huru unit iri ina-ikholamu dhizaini, iyo inotora iyo yepamusoro-yakagadzika mweya-yakatonhorera waya package.
6) Tora yekubata skrini uye sensor kuti uone murume-muchina interface, kugadzirisa kuri nyore uye nekukurumidza;
7) Iyo hydraulic zvinongedzo zveiyo yakanyanya-kumanikidza pombi chiteshi shandisa Italian technical mavhavha,
8) Gutsa yakadzika-yemvura zvemukati slurry (34% yemvura zvemukati) otomatiki jekiseni, yakagadzikana uye yakavimbika kubvisa
Yepamusoro humburumbira simba
Kumusoro humburumbira dhayamita
Upper humburumbira sitiroko
Lower humburumbira simba
Lower humburumbira dhayamita
Lower humburumbira sitiroko
Max. nzvimbo yemahara yekumusoro neyezasi yekushandira
Saizi inoshanda (kureba X upamhi)
Wepamusoro-wakasungirirwa mhepo-yakatonhorera waya package
Mhepo-yakanyorova magnetizing coil 100000ampere-turn
Max. jekiseni vhoriyamu yejekiseni pombi
Max. kurodha kwemusanganisi
Simba rese remuchina wese
550mm mukaha pakati peforoma zvigadziko, kukwirira 300mm
Iwo makoramu enhungamiro (mbiru) ichagadzirwa C45 inopisa yekuchengetedza simbi uye uve nechakaoma chrome unhani ukobvu 0.08mm. Uye ita kuomesa uye tempering kurapwa.
Dhizaini yemuchina wese inotora dhizaini dhizaini dhizaini uye inoongorora neyekugumira element. Iko kusimba uye kuomarara kwemidziyo kwakanaka, uye chitarisiko chakanaka. Ese zvikamu zvemuviri wemuchina zvakasungwa neepamusoro-soro simbi chigayo Q345B simbi yeplata, iyo yakasungwa nekabhoni dhayokisaidhi kuti ive nechokwadi chekutemesa mhando.
Yakagadzirwa ne45 # yekugadzira simbi, kudzima uye tempering
Kwazvo kukuya mushure mekuumburuka
Yakagadzirwa neChilled cast iron, kudzima uye kupisa
Icho chepamusoro chakakungurudzwa uye chrome-yakafukidzwa kuve nechokwadi chekuoma pamusoro peHRC48 ~ 55
Tora chiJapan NOK mhando yemhando yekuisa chisimbiso mhete
Inotungamirwa neyakafukidzwa nendarira, yakanaka yekupfeka kuramba, kuona kushanda kwenguva refu kwesirinda
1.Servo Sisitimu Inoumbwa
Nheyo yeServo Kudzora
Iyo huru humburumbira yekumusoro kamuri yakarongedzwa neyakaomesesa sensor, slide yakarongedzwa neinosimudza sensor controller. Zvinoenderana neanomanikidza mhinduro, chinzvimbo chekupa chiratidzo, kumanikidzwa kupihwa chiratidzo, chinzvimbo chakapihwa chiratidzo uye nekumhanya kupihwa chiratidzo kuti uone kutenderera kumhanya kweservo mota, kudzora pombi kuburitsa kumanikidza, kumhanya uye chinzvimbo kutonga.
Dhinda inotora PID kugadzirisa kumanikidza uye chinzvimbo, kuburikidza nekumhanya kweservo mota kutungamira yakavharwa-chiuno kudzora. Nekugadzirisa kumhanya kweiyo servo mota, inogona kudzora kumanikidza, kumhanya, chinzvimbo uye mamwe ma parameter eiyo hydraulic yekudhinda, nekubvisa iyo yekumanikidza yekudzora vharuvhu, inoyerera yekudzora vharuvhu uye zvimwe zvikamu mu hydraulic control wedunhu kuti ive nyore.
3.Zvakanakira Servo System
Zvichienzaniswa neyechinyakare kusiyanisa pombi system, iyo servo mafuta pombi sisitimu inosanganisa iyo inokurumidza isina danho yekumhanyisa mirau maitiro eiyo servo mota uye yekuzvidzora-yega mafuta kumanikidza hunhu hweiyo hydraulic mafuta pombi, iyo inounza rakakura simba rekuchengetedza simba, uye simba yekuchengetedza mwero inogona kusvika kusvika ku30% -80%.
Nhanho yekupindura inokurumidza uye nguva yekupindura ipfupi se20ms, iyo inovandudza kumhanya kwekumhanya kweiyo hydraulic system.
Iyo yekukurumidza mhinduro yekumhanyisa inovimbisa kuvhura nekuvhara kururamisa, iko kurongeka kwenzvimbo kunogona kusvika 0.1mm, uye yakakosha basa chinzvimbo kumisikidza kurongeka kunogona kusvika ± 0.01mm.
Iyo yepamusoro-chaiyo, yepamusoro-mhinduro PID algorithm module inovimbisa yakagadzikana system kumanikidza uye kumanikidza kushanduka kweasingasviki ± 0.5 bar, kugadzirisa chigadzirwa chigadzirwa.
Ruzha: Ruzha ruzha rweiyo hydraulic servo system iri 15-20 dB yakaderera pane iyo yepakutanga kusiyanisa pombi.
Kupisa: Mushure mekunge servo system yashandiswa, iyo hydraulic mafuta tembiricha yakadzikiswa yakazara, iyo inowedzera hupenyu hweiyo hydraulic chisimbiso kana inoderedza simba reanotonhora.
Multi-screen indasitiri inomiririra komputa inoziva iyo huru maitiro maparamendi uye zvinokanganisa zvinokonzereswa nemuchina, kunyanya zvinosanganisira zvinotevera ruzivo rwekutanga:
● Kukombama（Mpa 、 ℃） ● Pasiwedhi inodzivirirwa ● Dhijitari kuratidza ● Dhiyabhorosi kutsvaga
Platen chinzvimbo, 0 pane yakazara yakavhurika chinzvimboCycle timer
Kurapa kutenderera, nhanho muchirongwa. Kampu kumanikidza
Mufananidzo-Magetsi Kudzivirirwa Chengetedzo Mberi & Kumashure
Slide Kuvhara paTDC
Maoko maviri Ekushandisa Simira
Hydraulic Tsigiro Inishuwarenzi Dunhu
Kuwedzeredza Kudzivirirwa: Chengetedzo Valve
Liquid Level Alarm: Oiri chikamu
Tembiricha yemafuta Yambiro
Chikamu chega chega chemagetsi chine zadzisa kuchengetedzwa
Lock nzungu dzinopihwa zvinofamba zvikamu
Zvese zvinoitwa nemuchina zvine chekuchengetedza chakapindirana basa, semuenzaniso chinofambika chinoshanda hachishande kunze kwekunge kushini yadzokera panzvimbo yekutanga. Slide haigone kumanikidza kana chinofamba chinoshanda chiri kudzvanya. Kana pakaitika oparesheni, alarm inoratidza pane yekubata skrini uye inoratidza zviri kunetsana.
1.Oil tangi yakaiswa kumanikidzwa kutonhora kusefa system (kutonhora nemafuta chiller, mafuta tembiricha≤55 ℃, ita shuwa muchina unogona kudzikamisa mukati ma24 maawa.)
2.Iyo hydraulic system inotora yakavhenganiswa katuriji vharuvhu yekudzora sisitimu nekukurumidza kupindura kumhanya uye yakakwira kufambisa kushanda.
3.Tangi remafuta rakagadzirwa nefirita yemhepo yekutaurirana neyekunze kuona kuti iyo hydraulic mafuta haina kusvibiswa.
4.Kubatana pakati pevhavha yekuzadza netangi remafuta inoshandisa inowirirana mubatanidzwa kudzivirira vibration kubva pakuendeswa kune peturu tangi uye kugadzirisa zvakakwana dambudziko rekudonha kwemafuta.
5.Iye hydraulic pombi yemafuta inonyanya kugadzirwa isina musono simbi pombi, uye hombe dhayamita yemafuta nzira iri flanged. Iyo pombi yekubatanidza yakabatana neSAE flange zvakanyanya sezvinobvira. Icho chidimbu chinotakurika mhando ine yakanaka yekunamatira mhedzisiro uye zvinobudirira inogadzirisa dambudziko rekudonha kwemafuta rinokonzerwa nekusarongeka kwehuremu.
Pashure: Simbi upfu achiumba hydraulic muchina
Zvadaro: Munyu block hydraulic wokudhinda
Hydraulic kudzora system
Low voltage emagetsi mudziyo
Simbi upfu achiumba hydraulic muchina
Munyu block hydraulic wokudhinda